Faritra Boeny : tonga ireo fitaovana entina miady amin’ny covid-19 | NewsMada
Faritra Boeny : tonga ireo fitaovana entina miady amin’ny covid-19
Laharana fahatelo amin’ny faritra ahitana valanaretina covid-19 ny ao Boeny, amin’izao fotoana. Omaly, tonga tany an-toerana ireo fanafody sy fitaovana entina miady amin’ny covid-19, izay noraisin’ny lehiben’ny faritra, Andriantomanga Mokhtar Salim.
Misy ampahany amin’ireo fanafody sy fitaovana ireo no tonga amin’ny anaran’ny governora manokana ka iarahan’ny governora sy ny prefet ary ireo olom-boafidy mitantana ny fitsinjarana mba ho samy hisitraka izany ireo distrika tsirairay.
Nisy ampahany amin’ny fanafody sy fitaovana kosa voatokana ho ampiasain’ny CHU Mahavoky Atsimo sy ny CHU PzaGa. Iandraike­tan’ny talem-paritry ny fahasalamana ao amin’ny faritra Boeny kosa ny fitantanana izany miaraka amin’ireo le­hiben’ny CHU roa ireo.
Araka ny fanazavan’ny DRS Boeny dia misy anjara fanafody manokana ho an’ireo “cas contact” ka anisan’izany ny CVO. Eo koa ny fitaovana ho ampiasain’ireo mpisehatra sy ny mpiasan’ny fahasalamana.
Marihina fa nisy koa ny fitaovana fitarafana nomerika vao tonga izay hatolotra ny CHU Mahavoky Atsimo.